संम्बन्ध वि’च्छेद गरिसकेका पूर्व पतिसंग फेरी माया बस्यो, अब म के गरौं ? – List Khabar
Home / रोचक / संम्बन्ध वि’च्छेद गरिसकेका पूर्व पतिसंग फेरी माया बस्यो, अब म के गरौं ?
संम्बन्ध वि’च्छेद गरिसकेका पूर्व पतिसंग फेरी माया बस्यो, अब म के गरौं ?
admin 1 week ago रोचक Leaveacomment 78 Views
म २७ वर्षीया महिला हुँ। मेरो विवाह १७ वर्षको उमेरमा भएको थियो। त्यो बेला मेरा श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्थ्यो। माया९प्रेम के हो थाहा थिएन। बहकाउमा आएर गाउँकै विवाहित पुरुषसँग हे’ल’मेल भयो र माया प्री’ति बस्यो। उनीसँग शा’री’रि क स’म्बन्ध राखेपछि मलाई ग’ल’त गरें भन्ने लाग्यो अनि त्यो घरमा बस्नु उचि’त लागेन।
मैले आफ्नो घर छाडें र सम्बन्ध(वि’च्छेद गरे। जोसँग स’म्पर्क भयो, उनी ‘विवाहित भएकाले उनको घर जानु पनि उपयुक्त लागेन। मा’इती जाने प्रश्न नै भएन। मैले यी सबै बे’होरा अवगत गराएर श्रीमानलाई पत्र लेखें र यथार्थ कुरा बताएँ। अहिले म काठमाडौंमा तर’कारी बेचेर जी’विका चलाउँदैछु।केही समययता मेरा श्रीमान काठमाडौंमै व्या’पार गरेर बसेका छन्।
बेला बेलामा उनको र मेरो भे’ट हुन्छ। उनले गाउँमा दोस्रो विवाह गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि उनी मसँग असल व्यव’हार गर्छन्, दुःख९सुख सोध्छन् र विवाह किन न’गरेको भनेर सम्झाउँछन्।
एक्लै बस्नुभन्दा मेरै डे’रामा मसँगै बस भनेर कर गर्छन्। एक दिन म उनलाई भेट्न मात्र गएकी थिएँ, तर हामीबीच यौ’ ‘नस’म्बन्ध भयो। यस्तो कुराले म बिलखबन्द र पश्चातापमा परेकी छु। उनको डे’रा गएर सधैंका लागि बसौं, म जुठी भैसकें। नबसौं, उनको अ’नादर गरेजस्तो हुन्छ, द्वि’विधा र तनावमा छु। अब म के गरौं रु
तपाईंकै जस्ता घ’ट’ना थुप्रै मानिसले भोग्दै आएका छन। तपाईं मात्र द्विविधा र त’ना’वमा पर्ने एक्लो हुनुहुन्न। विगतका घ’ट’नाले तपाईंलाई पटक पटक घचघच्याइरहन्छ, यो स्वाभाविक हो। तपाइर्ंले उक्त घ’ट’नाबाट शिक्षा लिनुभएको छ कि छैन भन्ने पक्षचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। मनो’विज्ञानका हिसाबले आफ्नो पुरानो घ’ट’नालाई छलफलमा ल्याएर समाधान खोज्नु नै एक क’दमअघि बढ्नु हो।
त्यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा यस्ता घ’ट’ना रोक्नुभयो भने द्विविधा र तनावबाट बच्न सकिन्छ। त्यसैले विगतका घ’ट’ना’लाई शिक्षाका रूपमा ग्र’हण गरी बाँकी जीवनलाई सुख एवं सन्तो’षमय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
घ’ट’ना दोहोर्‍याइरह्यो भने स’म’स्या बढ्दै जान्छ।श्रीमान्सँग अलग भएपछि वा सम्बन्धविच्छेदपछि हुने यौ’ ‘नसम्बन्धका बारेमा धेरै लेख प्र’काशित भएका छन्। धेरैले अलग भएपछिको यौ’ ‘नसम्बन्धलाई ग’लत एवं अस्वस्थकर मान्छन्। मनोविज्ञानका हिसाबमा भने पुनः यौ’ ‘न सम्बन्ध राख्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा सम्बन्ध कहाँबाट किन बिग्रियो र त्यसलाई कसरी मि’लाउने भन्ने हो।
यदि यस्ता कुरा मिलाउन सकियो भने भविष्यको जीवन सुखद हुन्छ, मिलाउन सकिएन भने स’म’स्या अझ बल्झँदै जान्छ। त्यसैले मनोविज्ञानले विगतको कुरा थाहा पाउने तर त्यो घ’ट’नाबाटै समस्याको समाधान निकाल्ने कुरामा विश्वास गर्छ। तपाईंको जस्तै स’म’स्या संसारभरि घ’टिरहेका छन्।
यस्ता धेरै घ’ट’नामा मनोवैज्ञानिकहरू विभिन्न अ”नु’सन्धान गरिरहेका छन्। भर्खरै जर्नल अफ सोसिएल साइन्स इन्ड साइ’कोलोजीले एउटा रोचक तथ्य उजागर गरेको छ। कम्तीमा पनि १३ वर्ष सँगै बसेका र ४ महिनाअघि छुट्टएिका जोडीहरूमा एउटा अ.नुसन्धान गरिएको थियो। अ.नुसन्धानमा उल्लेख गरिएअनुसार ८२ प्रतिशत जोडीले अझै पनि सम्बन्धबिच्छेद भएका श्रीमान्९श्री’मतीसँग भेटघाट हुने र २१ प्रतिशतले अझै पनि यौ’ ‘न सम्बन्ध हुने गरेको बताए।
यसरी हेर्दा श्री’मानसँग अलग भएपछि हुने यौ’ ‘न सम्बन्ध त’नाव’युक्त नै हुन्छ भन्न सकिँदैन। यस्तो सम्बन्धलाई हरेक व्यक्तिले क’सरी लिएका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसले सम्बन्धविच्छेदलाई सहजै स्वी’कार गरेको थियो, त्यस्तो व्यक्तिलाई पछि हुने यौ” ‘न सम्बन्धले ग्लानि गराउँछ तर जसले सम्बन्ध विच्छे’द होस् भनेर चाहेको थिएन उसलाई भने ग्ला’नि हुँदैन।
हरेक जोडीको सम्बन्ध वि’च्छेदपछि हुने यौ’ ‘नसम्बन्ध त’ना’वमय हुन्छ कि हुँदैन भनेर निक्र्योल गर्नुभन्दा तपाईंलाई तपाईंको पूर्वश्रीमान्सँगको यौनसम्बन्ध कस्तो म’हसुस हुन्छ त्यसलाई आफैंले विचार गर्नु आवश्यक छ।
माथि भनिएजस्तो मनोविज्ञानका हि’साबले आफ्नो पुरानो घ’ट’नालाई छलफलमा ल्याएर समाधान खोज्ने साहस दे’खाउनासाथ समाधानतर्फ अघि बढेको मान्न सकिन्छ। यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा यस्ता घ’ट’ना रोक्नुभयो भने बाँकी जी’वनलाई सार्थक बनाउन ठोस सहयोग पुग्छ।
तपाईंको मुख्य समस्या के हो भने तपाईं एक्लो हुनुहुन्छ तर तपाईंका पूर्वश्रीमान् विवाहित हुनुहुन्छ। तपाईं आफ्ना विगतका घ’ट’नाबाट दुःखी भएकाले श्रीमान्सँग पूर्ववत् सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ। एएनजी, समय धेरै बितिसकेपछि कुनै पनि सम्बन्ध पहिलेझैं रहँदैन। त्यसैले यो सम्बन्ध कस्तो हो भनेर आफ्ना पूर्वश्रीमान्सँग छल’फल गर्नुहोस्।
छलफल गर्दा कुनै न कुनै निष्कर्ष अवश्य नि’स्कन्छ। निस्कन नसके तपाईंले यस्ता पश्चातापबाट बच्न मनोविद्हरूसँग स’म्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। करूणा कुँवर, मनोविद्यो उत्तर कानुनी वा अन्य पक्षभन्दा मनोवैज्ञानिक पक्षमा मात्र केन्द्रित छ ।यो सामाग्री पाठक बर्गका लागि साप्ताहिक पत्रि’काबाट साभार गरिएको हो ।
Previous चन्द्रमामा पृथ्वीको छाँया पर्ने गरि ५८० वर्षपछि भोलि लाग्दै छ सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण, कतिबेर रहन्छ ?
Next काठमाडौंको कोटेश्वरमै घट्यो यस्तो अनौठो घटना !